Masar waxay ugu baaqday Qaramada Midoobay inay soo faragaliso ka dib markii ay xannibmeen wadahadalada biyo xireenka Niil – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Masar waxay ugu baaqday Qaramada Midoobay inay soo faragaliso ka dib markii...
Masar waxay ugu baaqday Qaramada Midoobay inay soo faragaliso ka dib markii ay xannibmeen wadahadalada biyo xireenka Niil
Masar ayaa ugu yeertay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay inay soo farageliso si ay dib ugu bilowdo wadahadalada ku saabsan biyo-xireenka $ 4.6bn ee ay Itoobiya ka dhistay shirkadda Blue Nile ee ku dhow soohdinta ay la leedahay Suudaan.
Tallaabadan Jimcihii ayaa timid iyadoo xiisaddu kacsan tahay ka dib markii dhowr jeer oo wada-hadallo ah oo sannadihii u dhexeeyey Masar, Itoobiya iyo Suudaan ay ku guul darreysteen inay soo saaraan heshiis dhammaystirka iyo hawlgalka biyo-xireenka Grand Ethiopian Renaissance Dam.
Addis Ababa ayaa shaaca ka qaaday qorshayaal ay bilaabi doonto buuxinta biyo xidheenka bisha soo socota, iyada oo aan loo eegayn in wax heshiis ah la gaadhay iyo in kale.
Qaahira ayaa ka codsatay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay “inay soo farageliso si loo adkeeyo muhiimadda ay leedahay in sedex dal … ay sii wadaan wadahadalada si iimaan leh,” ayay wasaaraddu arrimaha dibedda Masar ku sheegtay hadal ay soo saartay.
Bayaanka ayaa lagu sheegay in dawlada jamhuuriyada carabta ee Masar ay qaadatay go’aankan iyada oo loo eegayo wadahadaladii la joojiyay ee dhawaan ka dhacay Dam-biyoodka Renaissance Dam taas oo ka dhalatay duruufaha Itoobiya ee aan wanaagsanayn.
Wareeggii ugu dambeeyay ee wadahadallada, kaasoo bilaabmay 9-kii Juun illaa shirkii fiidiyowga, ayaa daba socday wareeggii hore ee wada-hadalada ee Washington, kaas oo ku dhammaaday heshiis la’aan bishii Febraayo. Taariikhda looma cayimin wadahadallada la joojiyay inay dib u bilaabaan.
Muranka mudada dheer socday ayaa waxa uu dhigayaa damaca Itoobiya ee ah in ay noqoto quwad weyn oo dhoofisa tamarta iyo mashiinka horumarineed kana soo horjeedo walaaca Masar ee ah in biyo xireenku si weyn u xannibi doono sahaydiisa biyaha haddii si dhaqso leh loo buuxiyo.
Masar, oo inta badan gebi ahaanba ku tiirsan wabiga Niil biyaha ay ka hesho, waxay u aragtaa biyo-xireenku inuu yahay khatar suurtagal ah. Waa wax laga walwalo in la sugo heshiis sharci oo isku xidha kaas oo dammaanad qaadi kara qulqulka ugu yar iyo hannaan lagu xalliyo khilaafaadka ka hor inta aanu biyo-xidheenku bilaabin inuu hawl galo.
Suudaan muddo dheer ayaa lagu qabtay danaha u tartamaya.
Itobiya, imaatinka xilli roobaadka ayaa biyo badan u keenaya Blue Nile, waaxda ugu weyn ee wabiga Niil, Addis Ababa ayaa u aragta in ay tahay waqtigii ugu habboonaa ee la bilaabi lahaa buuxinta kaydka biyaha ee bisha soo socota.
Anaga ahaan, qasab ma ahan inaan heshiis gaarno ka hor intaanan bilaabin buuxinta biyo-xireenka, sidaa darteed, waxaan bilaabi doonnaa nidaamka buuxinta xilli-roobaadka soo socda, “Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Gedu Andargachew ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press Jimcihii.
Waxaan si aad ah ugu dadaalnaa sidii aan heshiis ula gaari lahayn, laakiin wali waxaan sii wadaynaa jadwalkayaga wixii ah natiijada ka soo baxda. Haddii aan sugno barakada dadka kale, markaa biyo-xireenku wuu sii jiri karaa sanado, taas oo aan ogolaan doonin in aan dhaca, “ayuu yidhi.
Gedu wuxuu diiday fikirka ah in arrinta loo gudbiyo Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, mana dhihi doono in waddankiisu uu u adeegsan doono ficil millatari si uu u difaaco biyo-xireenka iyo howlihiisa.
Masar iyo Itoobiya labaduba waxay ka dhawaajiyeen inay diyaar u yihiin inay qaadaan tillaabooyin militari oo ay ku ilaalinayaan danahooda, waxayna khubaradu ka cabsi qabaan in burburin wadahadalada ay horseedi karto khilaaf.
“Biyo-xidheenntani waxay ahayd inay noqdaan sabab wadashaqayn iyo is-dhexgal gobol, oo aan ahayn sabab muran iyo is-dhexgal,” ayuu yidhi Gedu. “Masriyiintu waxay buunbuuninayaan dacaayaddooda ku saabsan arrinta biyo-xidheenka waxayna ciyaarayaan khamaar siyaasadeed. Qaarkood waxay u muuqdaan sidii iyagoo raba inay dagaal bilaabaan.”
Mareykanka ayaa isku dayay inuu heshiis la galo bilowgii sanadkan, laakiin Itoobiya kama aysan soo qeybgalin shirkii saxiixa waxayna ku eedeeyeen maamulka Donald Trump inuu garab taagan yahay Masar.
Wadahadalladii u dambeeyay ayaa la arkay saraakiil ka socota Mareykanka, Midowga Yurub iyo Koonfur Afrika, oo ah guddoomiyaha hadda ee Midowga Afrika, oo goobjoog u ahaa goobjoogeyaal.
Wasiirka waraabka ee Suudaan Yasser Abbas ayaa wariyeyaasha u sheegay kadib wadahadaladii ay soo gabagabeeyeen arbacadii in seddexda hogaamiye waraabinta ay ku heshiiyeen “90 boqolkiiba ama 95 boqolkiiba” arrimaha farsamada laakiin muranka “qodobada sharciga” ee heshiiska ayaa ah in la kala diro.
Wasiirka Suudaan wuxuu sheegay in dalkiisa iyo Masar ay diideen isku dayga Itoobiya ee lagu soo daray qodobbada la xiriira wadaagista biyaha iyo heshiisyadii hore ee Nile ee heshiiska biyo-xidheenka.
Masar waxay heshay qayb libaax oo ka mid ah biyaha wabiga Niil heshiisyo dhawr iyo toban sano jir ah oo soo jiray xilligii gumeystihii Ingiriiska. Sideetan iyo shan boqolkiiba biyaha Niilka waxay asal ahaan ka soo jeedaan Itoobiya kana soo jeeda Blue Nile.
Joseph Siegle, oo ah madaxa cilmi-baarista Xarunta Afrika ee Daraasaadka Istaraatiijiyadda ee fadhigiisu yahay Jaamacadda Difaaca Qaranka, ayaa u sheegay Al Jazeera go’aanka Masar ee ah inuu ka codsado Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay inay qeyb ka tahay istiraatiijiyad ay ku doonayso inay ka ogaato Itoobiya.
“Waxaan u maleynayaa waxa Masar ay isku dayeyso inay sameyso waa inay sare u qaaddaa mowqifkeeda ayna cadaadiska ku sii wadato Itoobiya isku day ay ku doonayso inay ku saxeexdo heshiis rasmi ah oo ay ka gasho Itoobiya,” ayuu yidhi.
“Dhinacyada oo dhami waxay ku leeyihiin sharaf weyn iyo aqoonsi mashruucan. Webiga Niil wuxuu udub dhexaad u yahay jiritaanka Masar iyo aqoonsigiisa iyo dhaqaalaheeda” ayuu sii raaciyay, wuxuuna intaa raaciyay: “Ethiopia waxay ku bixisay $ 4.6bn oo kheyraadkeeda si ay u dhisto biyo xireenkan. Waxaa loo arkaa inay tahay meel lagu faano qaranimada, halkaasoo ay ku abuuri karto awood nafteeda iyo tan gobolka oo dhan si ay uga saarto saboolnimada dalka.Waxay soo mareen geedi socod aad u dheer oo lacag aruurin ah. laga bilaabo muwaadiniinta maalin kasta,
Previous articleKenya oo sheegtey dardargelinaysa danaha Afrika ee madasha UN-ka
Next articleEgypt referred the Renaissance Dam crisis to the UN Security Council
In Ka Badan Lixdan Ruux Oo Ku Dhintay Dooni La Dhacday...
Daraasad Cusub oo Ka Hadleysa Qiimaha Weyn ee Ag joogga Aabuhu...